Ny ekipa mikirakira firmware Fumax dia hanoratra firmware manokana mifototra amin'ny fitakian'ny mpanjifa. Ny firmware dia ho voarindra ao amin'ny hardware (PCBA) izay noforonin'ny ekipa injenieran'ny fitaovana Fumax. Vokatra miasa feno no vidiana amin'ny mpanjifa hohamarinina. Mampientam-po tokoa izany, ny fahitan'ny mpanjifa hevitra vaovao amin'ny tena vokatra tena izy!
Miaraha miasa amin'ny Fumax, ahodino ho tonga tena izy ny hevitrao!
Ny lozisialy Microcontroller dia fahaizan'ny Fumax Tech, ary ivon'ny ankamaroan'ny vokatra ampiasainay. Ny traikefa momba ny microcontroller malalaka an'ny Fumax Tech dia midika fa afaka manolotra sy mampiasa ny processeur tsara indrindra ho an'ny filan'ny mpanjifa tsirairay manokana izahay.
Ny zavatra niainantsika dia mandrakotra ny safidin'ny microcontroller rehetra misy, manomboka amin'ny fitaovana ambany 8-bit mankany amin'ny fitaovana 32-bit multicore avo lenta.
Fumax Tech dia nametraka endrika am-jatony maro tamin'ny fampiasana fitaovana 8-bit isan-karazany. Ireto microcontroller kely nefa matanjaka ireto dia afaka ampiasaina ho fitaovana peripheral na handroaka ny rafitra tsy misy tariby tanan-tanana. Ny processeur 16-bit matetika dia mameno ny fahafaha-manaony eo amin'ireo fitaovana 8-bit sy 32-bit. Ireo processeur avo lenta 32-bit dia afaka mihazakazaka ny Embedded Linux® na Windows Embedded ary manohana ny interface Ethernet, ny fisehoana LCD lehibe, ny touchscreen ary ny fahatsiarovana goavambe.
Ny ekipa rindrambaiko mikrôtrôro an'ny Fumax Tech dia miasa miaraka aminao mandritra ny faharetan'ny tetikasanao. Mandritra ny dingan'ny maritrano ny tetik'asa dia manombatombana ny takian'ny rafitra izahay ary misafidy ny processeur optimum ho an'ilay asa. Miara-miasa amin'ny ekipa elektrika izahay hampifangaro ny rindrambaiko amin'ny fitaovana, ary hamorona kaody fitsapana hamela ny fanandramana fanamarinana haingana ny takelaka vaovao. Manohana ny rindrambaiko amin'ny alàlan'ny fitsapana ny rafitra izahay ary afaka mamorona kaody fanandramana hanamarinana tsara ny fandidiana alohan'ny hamonosana ny vokatra ho an'ny fandefasana.
Ireto misy lisitr'ireo orinasa MCU izay nampiasainay teo aloha.
Orinasa MCU Andrefana:
Marika Taiwan MCU:
MCU sinoa eo an-toerana:
Harena Sino, www.bbt-bbt.com